Ugwu Vesuvius: njirimara, nhazi na eruptions | Network Meteorology
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ugwu ọgbụgba ọkụ nke na-ebute otu n'ime ọdachi kachasị egwu dakwasịrị na akụkọ ntolite. Ọ gbasara Vesubio mont. Ọ bụ ụdị ugwu mgbawa nke mere ka ugwu mgbawa ghara ịdị na ya ma ewere ya dị ka ugwu mgbawa kachasị dị egwu n'ụwa. Ọ bụ naanị ọkụ ọkụ na-agba agba dị na kọntinent Europe.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, njiri mara ala na ihe egwu nke Ugwu Vesuvius nwere.
2 Nhazi nke Ugwu Vesuvius
3 Mbibi nke Ugwu Vesuvius
Ugwu a dị na mpaghara Campania nke dị n’ebe ndịda Italytali. Ọ dị ihe dị ka kilomita 9 site na obodo Naples. Ọ bụ ugwu mgbawa a maara nke ọma maka inwe ụfọdụ aha dịka Vesaevus, Vesevus, Vesbius na Vesuve. Otu n’ime njirimara njirimara ugwu a nwere bụ na ọ bụ site na ya ngwakọta nke ọtụtụ lava, ntụ na-agbọpụ ọkụ, pọmpụ, na ụfọdụ ihe ọkụkụ. E mepụtara ihe ndị a niile na obere ntiwapụ ma gbakọbaala ọtụtụ nde afọ.
Ejiri ugwu Vesuvius dị ka otu ugwu ọkụ dị egwu n'ụwa. Mgbawa ya nke mgbawa ugwu ma ọ bụ ụdị stratovolcano mejupụtara. Ebe ọ bụ na mpi etiti nke ugwu mgbawa a pụtara na ugwu mgbawa, ọ dabara n'ụdị ụdị ugwu somma a. A na-ewere ya dị ka ugwu mgbawa kachasị dị egwu n'ụwa ma nwee cone nke ihe dịka 1.281 mita n'ịdị elu. A maara cone a na aha nke nnukwu cone. Okirikiri elu ugwu nke Monte Somma gbara ya gburugburu. Ugwu a nwere mita 1.132.
Ugwu Vesuvius na Ugwu Somma kewapụrụ site na ndagwurugwu Atrio di Cavallo. Dabere na mgbawa ugwu ndị na-ewere ọnọdụ, a gbanweela ịdị elu nke cones n'akụkọ ihe mere eme. N’elu ugwu ndị a nwere ugwu dị omimi karịrị mita 300.
Nhazi nke Ugwu Vesuvius
Ndị ọkà mmụta sayensị amụwo banyere mmalite nke ugwu mgbawa a n'akụkọ ihe mere eme na ọ maara na ọ dị elu karịa mpaghara subduction. Mpaghara a dị n’agbata Eurasia na Africa. A na-edozi efere nke abụọ a n'okpuru nke mbụ. Nke a pụtara na ọ na-emikpu n'okpuru nke mbụ na ọ na-eme ya na ọnụego nke 3,2 centimeters kwa afọ. Nke a bụ ihe kpatara enwere ugwu Somma.
Ugwu a kariri Vesuvius ugwu mgbawa dika eburu ya uzo. Ihe omumu ihe ochie kacha ochie amara sitere n’ugwu mgbawa ma di ihe di nari 300.000. 25000 afọ gara aga ka amatara na elu ugwu ugwu Somma ọ dara site na nnukwu mgbawa ma ọ bụ ebe caldera malitere ịmepụta. Otú ọ dị, ịmepụta cone nke bụ akụkụ nke Vesuvius amaliteghị ruo ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 17.000 afọ gara aga. Nke a na-eme ka Vesuvius bụrụ ugwu mgbawa ọgbara ọhụrụ. Mkpokọta nke Akwa Cone nke Vesuvius pụtara na AD 79. Ka Franklin pụta wee wuchaa ụlọ, nnukwu mgbawa ga-adị.
Agbanyeghị, ebidolarị saịtị a ụfọdụ nnukwu mgbawa na ntiwapụ na mpaghara ahụ tara ahụhụ site na ọrụ ike ịkụ ala. Mmalite nke ọrụ seismic mere na ebe a bụ n'ihi mmegharị nke efere tectonic na usoro nke ijikwa otu efere na ibe ya.
Anyị maara na ugwu a sitere na magma na-ahapụ n'elu ebe ọ bụ na a kwaturu ihe ndị na-esi na nri Africa. Ihe ndozi ndị a buru oke ibu ma nwee oke okpomọkụ. N'ikpeazụ, ihe ndị a nwere ike gbazee n'ihi okpomọkụ na ọ bụ ihe kpatara ya ji asọ elu ruo mgbe ọ gbajiri akụkụ nke ụwa.
Mbibi nke Ugwu Vesuvius
Anyị gaje inyochaghachi ihe ndị kachasị mkpa na ugwu mgbawa a nwere. A maara na narị afọ iri nke abụọ BC, ihe a na-akpọ mgbawa Avelino mere. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ukwuu na-agbọpụta na prehistory. Vesuvius ugwu mgbawa nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na-agbawa na n'ihi nke a, ọ ghọwokwa otu n'ime ihe ndị kasị dị ize ndụ ebe ọ bụ na ha niile siri ike. Nke kacha ochie nke akwadoro mere n’afọ 6940 tutu amụọ Kraịst enweela ihe karịrị 50 na-agbawa agbawapụworo ekwenye na ụfọdụ ndị ọzọ nwere akara ụbọchị.
Fọdụ ihe ike kachasị ike nke dị adị n’akụkọ ihe mere eme mere n’afọ 5960 BC. C. na 3580. Mgbawa abụọ ndị a siri ike ma tinye ugwu mgbawa dịka otu kachasị ukwuu na Europe niile. N’ime puku afọ nke abụọ BC, ihe a na-akpọ mgbawa Avelino mere, nke bụ otu n’ime ihe kachasị ike na akụkọ mgbe ochie niile.
N'agbanyeghị eziokwu a na ugwu ugwu a ama maka ugwu mgbawa ya niile, nke kachasị njọ na akụkọ ntolite niile na enwekwu ike ma kpatara mmetụta bụ nke mere n'afọ 79 AD Ọ bụ ebe a n’afọ 62 BC, ndị bi gburugburu gbara ala ọma jijiji siri ike. Ala ọma jijiji ndị a niile atụghị ndị obodo ahụ n’anya, n’ihi na ha mara ha ahụ. Mana, ka ọ na-erule afọ 79 AD, Vesuvius gbawara ma chụpụ igwe ojii dị ukwuu, gas na-agbọpụta ọkụ, ntụ, pịrịpịa, nkume a wụrụ awụ, na ihe ndị ọzọ. A chụpụrụ ihe ndị a niile na ịdị elu nke kilomita 33 na nrugharị nke 1.5 tọn kwa nkeji. Nke a bụ otu nnukwu ugwu mgbawa na akụkọ ntolite niile, ọ tụkwara onye ọ bụla anya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Ugwu Vesuvius na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Vesubio mont